Mhemberero yeNorth American Native Flute, violin uye tambo orchestra - David Warin Solomons 'Music Catalog
musha / Instrumental / Woodwind / Native American Flute / Mhemberero yeNorth American Native Flute, violin nemaketani emitambo
Mhemberero yeNorth American Native Flute, violin nemaketani emitambo
Kutenga Pano: Musicaneo
Ichi chidimbu chaive chakatanga kunyorerwa seyakaguma yenzvimbo yekuNorth American Native Flute uye tambo, pavari vanyori vashanu vakasiyana vakanyora mafambiro.
Iyo suite inoita yekutanga yemazhinji mapurojekiti neDelian Society - mubatanidzwa wevaimbi vanotsigira kukosha kwemaitiro ekutoni kumimhanzi mu21st Century uye yakakurudzirwa neNorth American Native flute player James Pellerite.
Mhemberero inoshandisa zvirevo zvina zvakasiyana uye vanozvicheka kuva mufaro unofadza. Soloist inozvisuma nechero yekudanwa kweiyo Native flute (mutsara unodzokororwa wechitatu), uyo unodzokorora nguva nenguva muchimwe chikamu chechidimbu, uye unobva watanga mhando yejig muEtafura huru mune iyo kunaka chimbo chinozvizivisa ipapo nekushongedza kwechinyakare uye yakadzika glissandi.
Mushure mekubhururuka pane jig theme kwechinguva, soloist anobva aunza vamwe vake, tambo idzi, kusanganisira mutambi wevayolist, uyo anounza dingindira rechitatu rebasa mune rakabatana reC mudiki.
Iyi tune tune yakavakirwa pane yechinyakare Westron Wynde melody asi inoshandisa isinganzwisisike rwiyo (3 3 2) uye kufara kwacho zvishoma nezvishoma kunotanga kukwira.
Saka ivo vaviri vega soloists rhapsodise pamagetsi akasiyana uye maatomatiki pamwe netambo yechechi, vachisanganisa matandi akasiyana siyana pamwechete.
Mukufamba kwenguva dingindira rechina rinopinda, uye zvinokatyamadza kuti rinoenderana sei neiyo E flat hombe - C diki kufananidzira, sezvo ichingori 12 toni mutsara. Iyo inotevera dzimwe dzetsika dze20th Century atonal composers, asi, nekuda kwemamiriro ezvinhu mairi akaiswa, inotora pane inodziya isingawanzo kuwanikwa mumimhanzi yeatonal.
Iva wekutanga kuongorora "Kupemberera North American Native Flute, violin uye tambo orchestra" kukanzura mhinduro
Zuva risina Shoko reNorth America Native flute, violin, viola, cello
Dzokera kuNorth America Native Flute, Viola, Guitar uye Cello
Kudonhora Kwechipiri Kumusoro kweNorth America Nyore uye manzwi evanhu (Tenor, Baritone, Bass)
Kudonhora Kwechipiri Kumusoro kweNorth America Nyore uye manzwi evanhu (Tenor, Baritone, Bass) Dzokera kuNorth America Native Flute, Viola, Guitar uye Cello
Makuru Makuru (66)
Wind Trios Quintets Sextets uye Nonets (360)
Other wind ensembles (29)
Mamwe kusanganiswa kunosanganisira saxophone (27)
Clarinet uye Piano (39)
Clarinet (s) ine zvimwe zviridzwa (77)
Mhete uye gitare (262)
Zviyero Zvitsvuku (45)
String Sextets neOctets (20)
Gitare mune mamwe masangano (199)
Saxophone uye Guitar (105)
Bassoon uye Guitar (100)
Guitar uye Cello (114)
Guitar uye Violin (104)
Guitar uye Recorder (86)
Duos ye cor cor uye gitare (125)
Viola uye Guitar (94)
Guitar naOboe (39)
Guitar uye Clarinet (240)
Choral Works - Manzwi evanhu - Mudzimu (12)
Nheyo dzeSolo Voice uye Guitar (133)
Solo izwi pamwe chete nedhimwe nhumbi (8)
Uri kutarisa: Mhemberero yeNorth American Native Flute, violin nemaketani emitambo